Gumii IHADEG Saglaffaa Irratti Dhimmoota Ijoo Ka’an
Bitootessa 27, 2013
Paartiin aangoo mootummaa harkaa qabu IHADEG Koongiresa isaa sagalaffaa xumuratee jira. Koongiresa kana irrattis obbo H/Mariam Dessaaleny dura-taa’aa paartichaa, obbo Demmeqee Mekonnin immoo itti-aaanaa gochuun filate.
Dhimmoota ijoo ta’an kanneen akka bulchiinsa gaarii fi imaammata bakka wal bu’iinsaa irrattis mari’atee jira. Namoon magaalaa Baahir Daar galma Koongresichi itti geggeeffamaa jirutti bilbiluudhaan dubbi-himaa ministrii dhimma alaa Itiyoophiyaa, Ambaasaddor Diinaa Muftii haasofsiisee jira.
Ambaasaddar Diinaan akka jedhanitti, mariin Koongiresichaa dhimmoota ijoo sadiitti fuuleffate. Isaanis: tokkoffaa, karoora jijjirama biyyattii waggaa shanii lafa kaa’amee ture keessatti deemsa waggoota lamaa fi walakkaa dabranii xiincaluu, lammaffaa - waa’ee bulchiinsa gaarii biyyattii keessaa xiinxaluun hanqina jiru guutuu fi sadaffaa – imaammata bakka wal-bu’insaa paarticha keessaa xiinxaluu ta’uu illee dubbatan – Ambaasaddar Diinaa Muftii.
Gtuutummaa gaaffii fi deebii Ambaasaddar Diinaa waliin geggeessamee as irraa caqasaa.